Shiinaha BONOVO China Amphibious Excavator Undercarriage Swamp Excavator Marsh Buggy warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Bonovo
BAASKUUL GUD AH
BAASKUUTKA XEERKA-XAD-dhaafka ah
BUKAANTA NADIIF AH NADIIF AH
DUKAANTA BULSHADA SILATKA
BAKHTIGA LA SOO SAARAY
BAKKELKA SHAQAALAHA SKELETON
DUKAANKA SHAQAALAHA ROTARY
GOOBTA SHARCIYADA LAGU SAMEEYO
CIIDAN & BOOM SOO ADEEG AH
GUDDOOM AH & BOOM
CIID & BOOM GAAR AH
SADDEX QAYBTA DHEX GELINTA & CARABTA
Jeex jeex jeex
Kabaha raad raac
Qalabaynta / Kireystaha
MAKIINADAHA CARRUURTA KU FILAN
Bandhigyada & Booqashada
Kooxda & Dhaqanka
BONOVO waarta tayo wanaagsan leh qodista baaldi suulka o ...
BONOVO caadadii waxay dhistay baaldi baaldi Loader Loader Lifaaq ...
BONOVO caadadii waxay jabisay jajabka sare iyo qaybaha dayactirka ee ...
Naqshadeynta asalka ah ee Bonovo guud ahaan waajibaadka ...
Warshad Bonovo iib toos ah iibinta dhagax baaldi xad-dhaaf ah ...
BONOVO Shiinaha Amphibious Excavator Undercarriage Undackar qoda Qodista Marsh Buggy
Qashin-qubka balaaran ee loo yaqaan 'amphibious excavator' waxaa si gaar ah loogu talagalay inuu ka shaqeeyo aagga qoyan, dhul qoyan, biyo hoose iyo dhammaan dhulalka jilicsan ee leh awood uu ku dul sabeeyo biyaha. BONOVO sifiican loo qorsheeyay pontoon / hoosta gawaarida ayaa si ballaaran oo wax ku ool ah loo codsaday si looga saaro dhoobada silty, nadiifinta dhufeysyada silted, ka saar alwaax, dhul-qoyan iyo hawl-gal biyo-gacmeed halkaasoo qodista-dhaqameedka caadiga ah ay leeyihiin xad.
Iyada oo BONOVO pontoons amphibious / undercarriage, waxaan ku cadeynay macaamiisheena waxqabad wax ku ool ah meelaha soo socda:
1) Nadiifinta dhulka qoyan ee macdanta, dhirta iyo dhismaha
2) Dib u soo celinta iyo dib u soo celinta qoyan
3) Kahortaga iyo xakamaynta daadadka
4) Mashruuca leexinta biyaha
5) Isbadal ku yimaada saline-alkali iyo dhul wax soo saarkoodu hooseeyo
6) Qoto dheeraanta kanaallada, marinka webiga iyo afka webiga
7) Banaynta harooyinka, xeebta, balliyada iyo wabiyada
8) Qodista godad saliida & gaaska dhigaya iyo rakibidooda
9) Waraabinta biyaha
10) Dhismaha muuqaalka iyo dayactirka deegaanka dabiiciga ah
Soo Saaraha Khabiirka Waxsoosaarka Amphibious
Isaga iyo 'Spud Mechanical Mechanism' waxay kuxiran yihiin pontoon kuxigeenka xiran, kaas oo lagu rakibay labada dhinac ee qodista balaastiga. Awoodda Haydarooliga waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo leexinta ama kor-iyo-hoos u dejinta. Dhererkeeda waxaa lagu go'aamiyaa qoto dheer aagga shaqada. Spuds-ka ayaa la sameeyaa markii la shaqeynayo, ka dibna lagu dhex geliyo dhoobada habka farsamada. Isticmaalka spuds waxay si weyn u wanaajin doontaa xasiloonida hawlgalka qalabka ee biyaha.
Qalabka Pontoon wuxuu ka samaysan yahay AH36 weel gaar ah iyo 6061T6 aluminium oo leh qalab xoog sare leh. Daaweynta ladagaalanka sunta waxay korsataa tiknoolajiyada iyo farsamada toogashada, taas oo si wax ku ool ah u hagaajiso nolosha isticmaalka.
Naqshad dhisme macquul ah iyo mid xaddidan
falanqaynta cunsurka baaritaanka burburka goobta ayaa hubiya awoodda qaadista iyo badbaadada Pontoon.
Pontoon Retractable waa muuqaalka gaarka ah ee BONOVO Amphibious Undercarriage. Waxay ka dhigan tahay in masaafada si toos ah loogu hagaajin karo inta u dhexeysa laba pontoon oo xadad gaar ah leh. Alwaaxda lagu qalabeeyay nidaamka kontoroolka hawo-gelinta, way fududahay in lagu shaqeeyo nabadgelyo sare. Inta lagu jiro shaqada dhismaha, haddii ay dhacdo jawi cidhiidhi ah, pontoons-ka masaafada u dhexeysa waa la yareyn karaa inta lagu jiro shaqada. Iyada oo la adeegsanayo shaqada hagaajinta booska, waxaan kaa caawin karnaa kor u qaadida xasilloonida jiifka iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee macaamiisha
Marka silsiladda la isticmaalo muddo ka dib, garoonku wuu sii kordhayaa sababo la xiriira xiridda pin-ka, taas oo ka dhigaysa silsiladda oo dhan inay sii dheeraato oo ay ka dhalato silsilad daadsan ama sibiibix ah marka la socdo. Waxay si daran u saameyn doontaa howlgalka. Qalabka isku dhejinta ayaa hubin kara silsiladda silsiladda iyo ilkaha qalabka wadista oo si habboon ugu hawlan adoo hagaajinaya booska jeexjeexa. Isku dhejinta boolku waa qaabeynta caadiga ah ee pontoonkeena. Isku dhejinta dhululubadu way ka fududdahay adkeynta boolida, taas oo sameyn karta isku dheelitirnaanta dheelitirka iyo hubinta socodka xasilloon oo wax ku ool ah.
Nadiifinta dhulka qoyan ee macdanta, dhirta iyo dhismaha dhismihii dib u soo celinta iyo dib u soo celinta Wetland
Kahortaga iyo xakamaynta fatahaada mashruuca leexashada biyaha Isbadal kudhaca saline-alkali iyo dhul wax soo saar hooseeya Qoto dheeraanta kanaallada, kanaalka webiga iyo afka wabiga oo la baneeyo harooyinka, xeebta, balliyada iyo wabiyada
Qodida godad saliida & gaaska dhigid iyo rakibid Biyaha
Dhismaha muuqaalka iyo dayactirka deegaanka dabiiciga ah
20T Qiyaasta Qiyaasta Qashinka
Hore: BONOVO DIGDOG DG25 qoda qod qashin qotodheer 2.5 tan oo mishiinka dhulka dhaqaajiya yar qodista mini qodayaal
J: Haa! Waxaan nahay soo saaraha la aasaasay 2006. Waxaan qabanaa adeegga soosaarka OEM ee dhammaan lifaaqyada qodista iyo qaybaha dhulka hoostiisa mara ee loogu talagalay astaanta caanka ah sida CAT, Komatsu iyo ganacsadahooda adduunka oo idil, sida Excavator / Loader Buckets, Extend Boom & Arm, Quick Couplers, Rippers, Pontoons Amphibious, iwm Qaybaha Gawaarida Gawaarida ee Banovo waxay bixiyeen qaybo badan oo ka mid ah dharka hoosta lagu xidho ee qodista iyo dorsers-ka. Sida gawaarida gawaarida, gawaarida xamuulka, idler, sprocket, link link, track track, iwm.
S: Maxaad uga dooranaysaa BONOVO shirkadaha kale?
A: Waxaan ku soo saarnaa alaabtayada gudaha. Adeeggeena macmiilku waa mid gaar ah oo shakhsi u ah macaamiil kasta. Wax soo saar kasta oo BONOVO ah waa mid gaashaaman oo adkeysi leh oo leh dammaanad dhisme oo 12-bilood ah. Waxaan u adeegsannaa waxyaabo tayo sare leh oo laga soo qaatay kuwa ugu fiican Shiinaha. Kooxdayada qaabeynta waxay si dhow ula shaqeeyaan macaamiisha wixii amarro qaas ah.
S: Shuruudahee bixinta ayaan aqbali karnaa?
J: Caadi ahaan waxaan ku shaqeyn karnaa shuruudaha T / T ama L / C, mararka qaarkood DP term.
1). xilliga T / T, 30% bixinta hore ayaa loo baahan yahay oo 70% dheelitirka ayaa la xallin doonaa ka hor rarka.
2). Ereyga L / C, 100% L / C oo aan laga noqon karin oo aan lahayn "qodobbada jilicsan" waa la aqbali karaa. Fadlan si toos ah ula xiriir wakiilada macaamiisheena muddo cayiman oo lacag bixin ah.
S: Qaabkee Loojistikada loogu keenaa alaabta
J: 1) .90% oo ah shixnad dhinaca badda ah, loona dirayo dhammaan qaaradaha waaweyn sida Koonfurta Ameerika, Bariga Dhexe, Afrika, Oceania iyo Yurub, iwm.
2). Dalalka deriska ah ee Shiinaha, oo ay ku jiraan Ruushka, Mongolia, Uzbekistan iwm, waxaan ku rari karnaa waddo ama tareen.
3). Qaybaha fudud ee baahida degdegga ah, waxaan ku gaarsiin karnaa adeegga dirista caalamiga ah, oo ay ku jiraan DHL, TNT, UPS ama FedEx.
S: Maxay yihiin shuruudaha dammaanaddaadu?
J: Waxaan bixinaa 12-bilood ama 2000 saacadood oo shaqo oo ah dammaanad-dhismeedka dhammaan alaabteenna, marka laga reebo fashilka ka dhashay rakibidda aan habboonayn, hawlgalka ama dayactirka, shilka, burburka, si xun u isticmaalka ama wax ka beddelka Bonovo iyo xirashada caadiga ah.
S: Waa maxay waqtiga hogaamintaadu?
J: Waxaan uga dan leenahay inaan macaamiisha u siino waqti hogaamineed oo deg deg ah. Waxaan fahansanahay xaaladaha degdega ah inay dhacaan oo soosaarka mudnaanta leh waa in laga door bidaa dhaqso u wareejinta. Waqtiga hogaaminta amarka saamigu waa 3-5 maalmood oo shaqo, halka caadooyinka amarradu ay yihiin 1-2 toddobaad gudahood. La xiriir badeecadaha BONOVO si aan u bixin karno waqti hoggaamineed sax ah oo salka ku haya xaaladaha.
Gawaarida gawaarida ee 'amphibious'
qashin qubka dhulka hoostiisa oo la iibinayo
qaybo ka mid ah dhulka hoostiisa
Qaybaha dhulka hoostiisa mara ee alaab-qeybiyeyaasha
hitachi qaybo ka hooseeya
qaybo dhulka hoostiisa mara
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Bulldozer ...
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida ...
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ...
BONOVO Jumlada Qaybaha Gawaarida Gawaarida ...
Nala soo xiriir Subscribe
Cinwaanka: Dhismaha A6, Yunchuang Technology Park, Xuzhou, Shiinaha 221000
Telefoon: + 86-0516-87533040
Right Xuquuqda daabacaadda - 2006-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.